.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ချမ်းချမ်း Collection
ဒီနေ့တော့ ချမ်းချမ်းရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ချမ်းချမ်းသီချင်းလေးတွေကိုရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာနားထောင်လို့ရအောင်ရော ဒေါင်းယူလို့ရအောင်ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။
1 ဘ၀ချင်းခြားတောင်ချစ်မှာ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
2 ပုံပြင်ထဲကကလေးလေး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
3 သီချင်းလက်ဆောင် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ချစ်ခဲ့မိတာ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
5 ထူးဆန်းတဲ့အချစ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
6 ဘယ်သူကိုယ့်လောက်ချစ်လဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
7 ကိုယ်သိထားရက် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
8 မယုံချင်လို့ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
9 လာမနွယ်နဲ့တော့ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
10 မှားပြန်တယ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
11 နှလုံးသားအလှဆင်တေး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
12 အကြင်နာအိမ်မက် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
13 ယုံကြည်သောအချစ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
14 ငါ့ရဲ့ကဗျာ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
15 ညို့နိူင်လွန်းတဲ့ကျွန်မချစ်သူ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
16 ပေးဆပ်ချင်းချစ်သူ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
17 နင်ထွက်သွားတော့ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
18 ရှိသည်ဖြစ်သည်ချစ်သည် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
19 ပြန်လာပြီ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
20 အဝေးကပဲချစ်မယ့်သူ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
21 တစ်ခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
22 အဖြည့်ခံ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
23 နေပါစေ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
24 တကယ်ပဲလဲနင်မချစ်ပဲနဲ့ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
25 မင်းရဲ့အရိပ်ကလေး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
26 တကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုတယ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
27 သိပ်ချစ်တယ် အရမ်းမုန်းတယ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
28 မေ့တော့မမေ့သေးဘူး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
29 ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
30 မျှော်လင့်ရင်းဝေး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
31 အချစ်စစ်စစ်နဲ့ တွေ့ လား ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
32 မနေ့ကအချစ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
33 မင်းကြောင့်ရူး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
34 အချစ်ဒါဏ် ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
35 အရင်လိုချစ်ဆဲမင်းကို ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
36 ဘယ်ကိုလဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
37 အားလုံးသောအချစ်တွေနားလည်နေ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
38 မင်းမှမချစ်ဘဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
39 ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
20 ရင်မှာမင်းတစ်ယောက်ထဲ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
19 အချစ်ဦး ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
40 ချစ်ခြင်းဧရာဝတီ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
ဒီဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်း ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by FlashSongCrazy at 06:04